Knowledges Zone: Password Recovery Magic
အခု စုဆည်းတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Password Recovery Magic လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် RAR (or) ZIP (or) Microsoft OFFICE
တစ်ခုခုမှာ မိမိ Password ပေးပြီး မေ့သွားလို့ ပြန်အသုံးပြုလို့ မရတော့ရင်
အခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ Password Recovery လေးတွေနဲ့ ပြန်လည်ရယူ နိုင်ပါတယ်။
အသုံးလိုသော မိတ်ဆွေများနဲ့ ဆောင်ထားမယ်ဆိုတဲ့
မိတ်ဆွေများဒေါင်းယူထားလိုက်ဗျာ ...MB ဘယ်လောက်မှ မရှိပါဘူး။
1. RAR Password Recovery Magic
2. ZIP Password Recovery Magic
3. Office Password Recovery Magic (Microsoft Office Access,Word, Excel,PowerPoint)
မူရင်းဆိုင်လေး သွားလေ့လာချင်ရင်ဗျာ.. ==> http://www.password-recovery-magic.com ဖြစ်ပါတယ်...။ အဲမှာတော့ ကျွန်တော်တင်ပေးသလို Free ရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျာ ၀ယ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ လပ်တလော သုံးလို့ရလဲ ၇က်ကန့်သန့်ချက်နဲ့ ရက် ၃၀
လောက်တော့ အဆင်ပြေနေပါလိမ့်မယ်။ ခုတင်ပေးထားတာတွေကတော့ Free ပေါ့ဗျာ
၇က်ကန့်သန့်ချက်လည်းမရှိဘူး အဆင်ပြေအောင် Serial Keys လေးတွေ
အကုန်ထည့်ပေးထားပါတယ်.. အသုံးပြုသူတိုင်း အဆင်ပြေပါစေ။
...............♣ အဆင်ပြေပါစေ ♣................